Satria ny ankamaroan'ny mpizahatany no miasa olona, ​​matetika izy ireo no te-hahita ny toerana tsara indrindra any Singapore mandritra ny 2 andro. Mba hanaovana izany, jereo ireto toerana manaraka ireto.
Tanàna Botanical City . Eto ianao dia afaka mihaino ny feon'ny vorona ekzotika, mankasitraka ny zaridaina mahavariana amin'ny orkide na ny zaridaina Ginger. Ny fidirana ao amin'ny zaridaina dia malalaka, misokatra ho an'ny fitsidihana hatramin'ny 5.00 hatramin'ny 0.00. Na izany aza, ny tapakila nasionalin'ny Orchids dia tsy maintsy mividy: mandoa 5 dolara ho an'ny olon-dehibe (ankizy maherin'ny 12 taona no maimaim-poana). Mora ny mankany amin'ny zaridaina botanika: mila miala amin'ny toeram-piaramanidina Botanic Gardens ianao, mipetraka eo amin'ny sampana mavo ary mandehana kely.
Raha mieritreritra ny zavatra hitranga ao Singapore ao anatin'ny 2 andro, aza manararaotra ny fahafahana hitsidika ny Loharanon'ny Harena . Io no lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ary any amin'ny faritry ny foibe fandraharahana Suntec City. Azo inoana fa raha mandingana in-telo ianao amin'ny loharano, amin'ny famerenanao ny tananao ao anaty rano, ny fahasambarana, ny fahasambarana ary ny harena dia tsy hamela anao. Afaka mankany amin'ny loharano ianao amin'ny alehanao amin'ny fiantsonana metro Promenade (andalana metro mavo) ary metatra metatra metatra fotsiny.
Fitsangatsanganana manerana ny tanàna, izay ahafahanao mamantatra izay mendrika hotsidihina any Singapore ao anatin'ny 2 andro, matetika dia ahitana dia fitsangatsanganana an -kalamanjana amin'ny bisy amphibian . Amin'ity tranga ity, tsy afaka mandeha eny an-dalambe fotsiny ianao, fa mankafy rivo-doza koa, ary ao anatin'ny 60 minitra monja. Ny bus dia mamela ny antsasak'adiny avy ao amin'ny foibe City Center Suntec, ary ny saran'ny fitsangatsanganana dia handoa anao 33 dolara ho an'ny olon-dehibe ary 23 dolara ho an'ny zaza iray.
Mankany Singapour ary tsy hitsidika ny zoo ao an-toerana - ity dia tena fahafahana tsy hita. Raha ny zava-misy rehetra, dia misy biby sy vorona manana lanjany miisa 3.500 eto, ary tsy dia fahita firy izany. Ny zoo dia misokatra amin'ny 8.30 hatramin'ny 18.00, saingy tsy manakaiky izany: eto dia manomboka safari iray alina mahafinaritra, rehefa voapoizina anaty fiara kely iray ny mpitsidika, eo ambanin'ny hazavana izay manahaka ny volana. Ny lalana toy izany mankany amin'ny tontolon'ny biby sy ny biby dia ho mahaliana indrindra amin'ny ankizy . Ny fotoana fiasan'io toe-javatra io: 19.30 ka hatramin'ny 0.00. Ho an'ny tapakila dia tsy maintsy mandoa $ 18 ianao amin'ny fitsidihana mahazatra any amin'ny vala sy $ 32 noho ny fandraisana anjara amin'ny safari iray alina. Mba hahatongavana any amin'ny foibe afovoan-tanàna dia tsara indrindra amin'ny taxi: hividy $ 15 ianao. Azonao atao ny mandray any amin'ny seranan-tsambon'i Metro ao Choa Chu Kang (laharana NS4) ary mandray ny bus 927, ny manaraka mankany amin'ny zoo. Safidy iray hafa ny miala amin'ny fiantsonana ambanin'ny tany ao an-drenivohitr'i Ang Mo Kio (andalana NS16) ary mitondra fiara fitateram-bahoaka 138.
Raha tsy nanapa-kevitra ny hiditra any Singapour nandritra ny 2 andro ianao, tsidiho ny faritra faran'izay tsara any Chinatown sy Little India . Tena afaka maimaim-poana izy io, ary mora ny mahazo azy: mandehana mankany amin'ireo metro metro miaraka amin'ireo anarana. Any Chinatown, ny sainao dia tena hahasarika ny tempolin'i Sri Mariamman (244, South Bridge Road) ary ny Moskeo Jamae Chulia, any amin'ny 218, South Bridge Road. Misy koa ny trano fisakafoanana tsy dia lafo , izay mahasalama tokoa ny sakafo. Saingy ao amin'ny faritr'i Little India, mendrika ny tempolin'i Sri Veeramakaliamman (141 Serangoon Rd) sy ny moskea an'i Abdul Gaffour (41 Dunlop St), ary koa fivarotam-boky maro samihafa manolotra vokatra nentin-drazana nentim-paharazana.
Volkano any Japana
Inona no ho hitanao any Kambodza?
Hot Springs any Korea Atsimo
Mora ny manidina any Singapour?
Ahoana no hamahana pear amin'ny fararano?
Ahoana no hanafoanana ny nify?
Ahoana ny fanesorana totozy ao amin'ny lakaly?
Inona no azonao entina avy any Shina?
Nahoana no miharatsy ny tendako?
Tombo-kase ny divay
Canapé misy trondro mena
Hazo voninkazo tsy misy tratra noho ny fandriana fotsy iray eo amin'ny tara-masoandro
Inona no famenoana ny Pekingese?
Porofo tsy misy fepetra ho an'ny trano fandroana
Sakafo ny plastika
Ireo kiraro fanatanjahan-tena amin'ny vehivavy
Midika hoe misoroka
Fanadiovana tarehy ao an-trano - fomba fitsaboana